Akanaka Smart plugs eUK - ALinks
Munyika yanhasi yehunyanzvi, zvese zviri kungwara mazuva ano. Kubva pakufamba kuenda kumagadget, zvinhu zvese zviri kuwedzera kuwanda nekushandisa matekinoroji azvino uno. Pano, isu tiri kutaura nezve chimwe chigadzirwa chakangwara chakakanganiswa neiyo tekinoroji iri Smart plug Saka, ngatitorei rumwe ruzivo nezve Smart plug.
Chii chinonzi Smart Plug?
Iyo smart plug imhando yepulagi iyo inofambiswa neiyo wifi internet uye inogona kuvhurwa uye kubviswa kure kure kuburikidza neiyo smartphone. Idzi dzakasungirirwa kune yakajairwa socket uye yepamusha wifi network, ichibvumira isina waya kutonga kweye plug plug. Yakangwara yekubatanidza inowanzo kunzi se smart socket. Iwo akanakisa mapaki plugs uye smart magetsi mabhendi anokugonesa iwe kutarisa mhando dzakasiyana dzemidziyo diki usingatombofaniri kuve padhuze kana kana kunyangwe pamba. Batanidza chigadziko chemwenje kune smart socket, semuenzaniso, uye iwe unogona kudzima mwenje uye kudzima neako smartphone kana chaiyo mubatsiri.
Zvakanakira ma Smart plug:
Kuisa smart plugs mumba mako kuri nyore.
Simba uye kudzima nekubata kamwe chete, kunyangwe usiri pamba.
Imba yeGoogle neA Alexa zvinodzora zvachose ne smartphone uye izwi rako.
Seta timer yekuisa smart plug nekudzima kuti ugone kugadzira kofi usati wamuka.
Kuwedzera kwesimba kwekushandisa kunogona kudzivirirwa nekuchengetedza zviwanikwa zvemagetsi.
Kana iwe ukakanganwa kudzima mudziyo uye uri kure nemusha, unogona kuidzima uchishandisa smartphone yako.
Mamwe Akanakisa Smart plug:
Kasa Smart Plug neTP-Unganidzo
Ipo TP-Link ichizivikanwa zvirinani netambo yayo yeWifi ma routers uye zvinowedzera, kambani zvakare inogadzira smart plugs. Izvo zvakachipa, zviri nyore kushandisa, uye zviri nyore kumisikidza. Uine TP-Link Smart WiFi Plug, unogona kudzora zvemagetsi ako kubva chero kupi uchishandisa yako smartphone. Iyo Tapo software inobvumidza iwe kushandura zvishandiso mukati nekuvhara, kuongorora iwo mamiriro avo, kuvaka mashedhiyo, uye kumisikidza nguva. Wana rugare rwepfungwa nekure kure uchiongorora makomputa ako uye kudzokera kumba kune yakavhenekerwa imba. Paunotyaira, shandisa nzira yekuita kuti zviite senge uri kumba, uye rongedza mwenje kuti ubatidze nekudzima pane mamwe maawa kuti uchengetedze magetsi nemari pane yako inotevera bhiri. Nokubatanidza Amazon Alexa neGoogle Imba, unogona kuwedzera izwi kudzora kune chero chigadzirwa chemagetsi.
Voice Control inoenderana neAmazon Alexa uye Google Mubatsiri.
Iko hakuna kudikanwa kwehubhu yakasiyana nekuti inoshanda neese Wi-Fi router.
Remote Control - Shandisa yemahara Tapo software pane yako foni kudzora zvishandiso zvakasungirirwa kune smart plug kubva chero kupi.
Purogiramu uye Nguva - Shandisa smart plug's schedule uye timer kuvhura uye kudzima zvemagetsi sezvazvinodiwa.
Kugovera Midziyo Yekutarisira Mvumo - Govera manejimendi manejimendi manejimendi nenhengo dzemhuri kuti uwane zvakanyanya
Iyi Teckin smart plug ndechimwe chishandiso chine wired chinoshanda ne Alexa neGoogle Mubatsiri. Uine yemahara Smart Hupenyu app, iwe unozogona kuongorora ako plug-in mwenje nemidziyo kunyangwe usiri pamba. Inoshanda pane mafoni eApple neIOS uye inokutumira chaiwo-nguva simba rekushandisa mashandisiro. Iyo nyowani yekumisikidza yekugadzika inokwana mushe muUK yemadziro socket uye haina kukanganisa nekutendeuka. Zvakare, smart plugs anoshanda nechero yeWi-Fi router uye haadi yakasarudzika hub.
Remote & Kudzora Yezwi
Purogiramu & Timer Rinoshanda
Iyi smart plug inoenderana nezvose zviri zviviri iOS neApple zvishandiso uye inogona kubatsira pakushanda nemapundu-kusvika-kusvika mapuragi akatenderedza imba. Iyi komputa, senge TP-Link smart plug, inoshandisa Away Mode kupusisa vanopfuura-kuenda mukutenda kuti uri pamba iwe usipo. NETVIP WiFi Smart Plugs inzira yakapusa uye inodhura yekushandura michina yakajairika, mwenje, nemimwe michina yemagetsi kuita michina yemumba yakangwara yaunogona kuwana kubva kune yako smartphone. Gadzira Imba Yakapusa nekubaya wakananga mune socket yemadziro kana tambo yemagetsi, kubatanidza kune yepamusha WIFI network, uye kushandisa yavo yega nzira yekubaya kune iyo gadget iwe yaunosarudza kuita otomatiki.
Inopenya Ruvara Chiedza
ALEXA uye GOOGLE Mubatsiri Anowirirana
akanakisa plugsSmart plugssmart switch
Tafura yepamusoro yemapuranga yekofi muUK
Xiaomi Redmi Cherechedzo 8 Pro inowanikwa muUzbekistan - ongororo, zvirevo uye mutengo
Yakanakisa selfie tsvimbo ye iphone uk
Organic Rose Mvura Brands muIndia! Tarisa pano!